पोखरामा सेतो पुतलीको संक्रमण
As of Wed, 08 Apr, 2020 13:50
पोखरामा दुई वर्षपछि पुनः सेतो पुतली देखा परेसँगै यसको संक्रमणबाट मानिसहरु प्रभावित हुन थालेका छन् । पोखराका विभिन्न ठाउँमा सेतो पुतली देखा परेसँगै यसको संक्रमणबाट यस वर्ष पोखरामा हालसम्म ६ जना प्रभावित भएको हिमालय आँखा हस्पतालका प्रमुख डा. इन्द्र महर्जनले बताए । केहीको शल्यकृया, केहीको औषधि र केहीको सूई विधिबाट उपचार गरिएको डा. महर्जनले जनाए । हाल संक्रमित अधिकांश बालबालिका छन् ।
प्रायः भदौ र असोजमा एक वर्ष बिराएर देखा पर्ने सेतो पुतली मानवको निकै नै संवेदनशील अंग आँखामा यसको कणहरु पर्न गएमा समयमै उपचार हुन नसके आँखाको ज्योति नै गुम्न सक्ने डा. महर्जनले जनाए । सेतो पुतली संक्रमित भएका बिरामीलाई समयमै वा एक दिन (२४ घण्टा) भित्र उपचार गर्न सम्बन्धित अस्पतालमा पु¥याउन सकेको खण्डमा उपचार सम्भव हुने उनले बताए । उनका अनुसार दुई वर्षअघि पोखरामा सेतो पुतलीका कारण २६ जना बिरामी अस्पतालमा उपचार गर्न पुगेका थिए ।
५ वर्षमुनिका बालबालिकाहरुमा सेतो पुतली संक्रमण बढी हुने हुँदा यसबाट जोगाउन डा. महर्जनले आग्रह गरे । सेतो पुतली संक्रमण भएको एक दिनभित्र उपचार गर्न आँखा अस्पतालमा पुगेमा शतप्रतिशत उपचार गर्न सकिने, दुई दिनपछि जाँदा ५० प्रतिशत आँखाको ज्योति गुम्ने जोखिम हुने, तेश्रो दिनपछि जाँदा ९० प्रतिशत जसो जोखिम हुने डा. मर्हजनले जनाए ।
सेतो पुतली संक्रमणले आँखाको कालो भागमा सेतो देखिन्छ । डा. महर्जनले भने, “आँखामा एन्टिबायोटिक इन्जेक्सन लगाउँदा आँखामा जमेको पिप हटाउन र ज्योति बचाउन सकिन्छ ।” सेतो पुतलीको रियाक्सनले समयमै उपचार हुन नसके आँखाको रेटिनासहितको भाग नै नष्ट पार्ने डा. महर्जनले बताए ।
गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा सेतो पुतलीबाट बच्न र बचाउनको लागि आफूहरुले विभिन्न निकायमा समेत जानकारी गराएको डा. महर्जनको भनाइ छ ।
क्वारेन्टाइनमा राखिएकालाई विदाई
कोरोना परीक्षणका लागि शिक्षण अस्पतालमा पीपीई बुथ